မြန်မာနိုင်ငံတွင် e-Government စနစ်အား လက်ရှိ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နေမှု အခြေအနေ
Ministry of Transport and Communications | Apr 18, 2018
မြန်မာနိုင်ငံတွင် e-Government စနစ်အား လက်ရှိ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်နေမှု အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ သင်၏ထင်မြင်ယူဆချက်ကို ဆွေးနွေးနိုင် ပါသည်။
We're hoping to get one stop service in every ministry department. Its time saving.
e-government ဖြစ်ဖို့ ကြာဦးမယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ၁- လက်ရှိ policy maker level ဟာ digital illiterate တွေ ဖြစ်နေတယ်။ e-government ရဲ့ အနှစ်သာရကို မသိဘူး။ နောက်တခုက မီဒီယာကို ကြောက်တယ်။ သတင်းပေါက်ကြားခြင်းနဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းကို မကွဲဘူး
၂- ဌာနတွေမှာ e-government အတွက် သီးသန့် တာဝန်ပေးထားတဲ့သူ ရှားတယ်။ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူလည်း နည်းတယ်။ တကယ်က ဒါမျိုးဟာ သီးသန့် အချိန်ပေးပြီး လုပ်ရတဲ့ ရေရှည်အလုပ်ပါ။ အခုတော့ တခြားတာဝန်တွေနဲ့ လုံးလည်လိုက်နေသူက တွဲကိုင်နေရတယ်။
၃- ဌာနတွေမှာ ငွေကုန်ကြေးကျခံပြီး e-government သင်တန်းတက်ထားသူတွေ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်လုပ်တော့ ပြန်မထည့်ဘူး။ (ဘယ်သူတွေ တက်ထားမှန်းတောင် မသိကြတော့ဘူး) ဒီတော့ အချိန်၊ လုပ်အားတွေ ဆုံးရှုံးတယ်။ တကယ်လုပ်နေသူတွေက e-government ကို အကျွမ်တဝင် ဖြစ်မှု အားနည်းတယ်
၄- ပြည်သူ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု နည်းတယ်။ (ဖိတ်ခေါ်တာ နည်းတာကိုး၊) ပြည်သူမပါဝင်တဲ့ အပြောင်းအလဲဟာ အောင်မြင်ဖို့ ခက်ပါတယ်။
2 Years ago in reply to Thetka Moenyo .
အစဉ်အမြဲ အချိန်နှင့်တပြေးညီ Update ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားနည်းသည်ဟု ထင်မြင်ယူဆမိပါသည်။
Youths need to take in the leading roles of e-governmentalization of Myanmar as they are more digitally literate.
ForumForum မှာအခြားခေါင်းစဉ်တွေပါတင်ပေးမယ်ဆိုရင် လိုအပ်တဲ့ အကြံညဏ်တွေထောက်ပြနိင်တာတာပေါ့ Blog လဲဖွင့်ပေးပါ တင်မယ့် အချက်အလက်တွေမကြိုက်ရင် ဖျက်ပေါ့ E gov က ချက်ခြင်း အုံဖွတော့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ ဒီလိုပဲ တဖြည်းဖြည်း စရတာပေါ့ဗျာ လောလောဆယ် mm.gov မှာတင်ထားတဲ့ အချက်အလက်တွေ သဘောကျတယ် ဒါပေမယ့် ရှာရတာနည်းနည်းခက်နေသေးတယ် ဒီ ကနေပဲ အစပြုလိုက်နောက်တဖြည်းဖြည်း Develop ဖြစ်လာလိမ့်မယ် Zawgyi ရိုက်လဲ Uni - Myanmar3 ပေါ် တဲ့ နည်းပညာလုပ်ပေးအုံး
e-government ဖြစ်ဖို့ ကတော့ မလွယ်ပါဘူး။
နံပတ် (၁) ကတော့ Skilူl Worker တွေ မရှိဘူး။ လက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအများစု ၈၅% ကျော်လောက် ထိကို နည်းပညာ ဆို ကကြီး ခခွေးတောင် မသိကြသူတွေ၊ အင်တာနက် အီးမေးလ် ဆိုတာဝေးပါတယ်။ ကွန်ပျူတာ စာစီစာရိုက်တောင် ကောင်းကောင်းမတတ်သေးတဲ့ အနေအထားဖြစ်နေတယ်။ Facebook အကောင့်တောင် မဖွင့်တတ်သူတွေ အီးမေးလ် ဆိုတာ G Mail လားဆိုတာ မသဲကွဲသူတွေ အများကြီးပဲ။ ဒီ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ကို Capacity Building လုပ်ဖို့ဆိုတာ အတော့်ကိုမလွယ်ဘူး။ မယုံရင် ဒီ Wet Portal ကိုပဲကြည့် လာတဲ့သူ ဘယ်လောက်များလဲ အဲ့လိုလာကြည့်သူထဲ ၀န်ထမ်းဘယ်နှစ်ယောက်ပါလဲ။ အကောင့်တောင် ဖွင့်တတ်ကြမယ် မထင်ဘူး။
၂- e-government အတွက် သင်တန်းပေးတော့လဲ အချိန်ကုန် လူပန်း For Show တွေ များနေပြီး တကယ်မတတ်တာတွေ များနေတယ်။ လူကြီးတွေကလဲ သိလားဆိုတော့ သူတို့လဲမသိဘူး။ ကွန်ပျူတာလက်ကွက်လောက် တချောက်ချောက်ရိုက်တတ်ရင်ကို ဒီကောင် ဆရာကျတယ်ဆိုပြီး တာဝန်ပေးရော။ ဖော် ရှိုး တွေမလုပ်ပဲ စနစ်တကျ skill ရှိသူတွေ ခေါ်ယူ သေချာ သင်ယူခိုင်းပြီး မှ ၀န်ထမ်းတွေရော လူကြီးတွေပါ နည်းပညာ ရေချိန်မြင့်လာမှ ဒီစနစ်က ကောင်းကောင်း အသက်ဝင်မှာ။
ဥပမာ လူကြီး/ ၀န်ထမ်းတိုင်းက ကျနော့်လို လူချည်းပဲဆို ခဏလေးအောင်မြင်မှာ ဟဲဟဲ (ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုယ်ဖော် မသူတော် လုပ်လိုက်ဦးမယ်)
ဗီယက်နမ်မှခရီးသွားနှင့်မြန်မာများအတွက်အားလပ်ရက်အပေါ်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်ဟိုတယ်များအဘို့စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းရဖို့ https://www.hotels-in-vietnam.com အပေါ်တစ်ဦးကအခန်းဘွတ်ကင်။
I hope government and citizen relationship is much better with e-government real information.
e-government စနစ်အောင်မြင်ရန် ဝန်ကြီးဌာနအချင်းချင်းပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်ဟုထင်မြင်မိကြောင်း
ပြည်သူတွေတိုင်းက လိုအပ်လာရင် ကူညီနိုင်ဖို့အချိန်တိုင်း အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ဆောင် ချက်တွေကို စောင့်ကြည့်နေကြတာပါ။ မဖိတ်ခေါ်ဘဲနဲ့တေ့ာ ဘယ်ပြည်သူမှ ပူးပေါင်းပါဝင်လို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
9 Months ago in reply to Nyi Nay Min .
I suggest to describe e-Government system briefly for planning, implementation, challenges and way forwards here. And thus we can discuss our opinions and give more feedback and suggestions. Now, I know just briefly there are4big MIS in e-Government (HMIS, EMIS, SMIS, and digital NRC smart card). Can we know detail about MM e-Government system?
အခုထိကို ဘာမှန်း မသိသေးဘူး တကယ်တော့ e-government စနစ်ဆိုတာ နိုင်ငံအတွက် အရေးအကြီးဆုံးစနစ် တခု တကယ်ဆို အခုလို ဆွေးနွေးချက်တွေ မှာ တာဝန်ရှိသူတွေ ဝင်ပြီး ဆွေးနွေးရမှာ ခုတော့ ဒီမှာရေးထားတာတွေကိုဖတ်ရဲ့လားတောင်မသိပါဘူး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်